Plugdị Akwụkwụ na Mpempe A & B - Ndị na-enye mgbasa ozi maka mmanụ dị Mkpa | AromaEasy
Plugdị ike & mputa ụdị A & B
A na-eji Adị A dịka ọmụmaatụ, na North na Central America na Japan. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị A)
Ihe nrịba ama nke abụọ n’edemede abụọ a na-emebeghi emezi bụ ezigbo ọkọlọtọ na North na Central America. A maara ya dị ka NEMA 1-15 ma mepụtara ya na 1904 site na Harvey Hubbell II. Ihe nkwuputa ahu nwere okpukpu okpu gbara okpukpu nke 1.5 mm, na nha 15.9 - 18.3 mm n'ogologo ma gbaara 12.7 mm iche.
Adị A pọpụl pọpọzị niile enwere ike itinye ya n'otu ụzọ maka ọgịrịga abụọ ahụ enweghị otu obosara. Okpukpo nke jikọtara na-anọpụ iche bụ 7.9 mm obosara yana agụba dị ọkụ bụ obosara 6.3 mm E dere nkwụnye a na 15 A.
Adị anddị A na B nwere pia abụọ nwere oghere (ọ na-abụkarị oge niile) oghere dị na ngọngọ ahụ. Oghere ndị a adịghị ebe ahụ n'enweghị ihe kpatara ya. Y’oburu na i wepu udiri mmetuta nke A ma obu lelee anya onye metutara aka na ya, i gha achoputa n’onodu ha nwere hapu ya.
Ọkpụkpụ ndị a dabara n'ime oghere ka ọpụpụ nwere ike ijide plọg plọg ọzọ. Nke a na - egbochi plọg ihie na ntọala ahụ n'ihi ịdị arọ nke plọg na eriri. Ọ na - eme ka kọntaktị dị n'etiti plọg na mpụga dị mma. Cketsfọdụ sọks agbanyeghị, enwereghị mgbada ndị ahụ kama ọ bụ naanị ụyọkọ mmiri abụọ nke na-ejide akụkụ nke pin plọg ahụ, nke mere oghere ndị ahụ adịghị mkpa.
Enwekwara ụfọdụ ụzọ pụrụ iche nke na-enye gị ohere igbachi eriri ahụ n'ime oghere ahụ, site na itinye ụdọ n'ime oghere ndị ahụ. N'ụzọ dị otu a, igwe anaghị ere ngwa ahịa na ihe ndị yiri ya.
Ọzọkwa, ngwaọrụ eletrik nwere ike emechiri emepe site n'aka onye nrụpụta na-eji eriri eriri rọba ma ọ bụ obere mkpọchi site na otu ma ọ bụ ha abụọ nwere oghere mkpọ.
Iji maa atụ, onye na-emepụta nwere ike tinye eriri rọba site na oghere ahụ ma tinye ya na mkpado na-ekwu: “Youkwesịrị ime X ma ọ bụ Y tupu ịbụnye na ngwaọrụ a”. Onye ọrụ ahụ enweghị ike ịgbanye na ngwaọrụ ahụ na-enweghị wepụ mkpado ahụ, yabụ onye ọrụ ji n'aka na ọ ga-ahụ ihe ngosi.
Adị A na B pọpụsịshọn (ya bụ, pin pinks enweghị mkpuchi ojii ka ọ dị n’akụkụ plọg dịka ụdị C, G, I, L or N plọg) na mpụga apụtaghị na mgbidi ahụ, nke pụtara na ọ bụrụ na adọpụta plọg nke ọkara, mpụga ya ka nwere njikọ ahụ.
Cketsdị A na B nwere ike ịdị ize ndụ, ebe ọ bụ na anya dị n'etiti ebe a na-adọta ya na ebe a na-adọkpụpụta akụkụ bụ nnukwu iji metụ mkpịsị aka gị ma ọ bụ jiri ihe igwe dịka teaspoon.
A na-eji Bdị B mee ihe atụ, na North na Central America na Japan. (Pịa Ebe a maka ndepụta zuru oke nke mba niile na-eji ụdị B)
Edebere klas a ka m kọwara dịka NEMA America 5-15. O nwere okpukpu abụọ pere mpe 1.5 mm gbara agba, obosara ya dị 12.7 mm, tụọ 15.9 - 18.3 mm n'ogologo na 6.3 mm n'obosara. O nwekwara okirikiri 4.8 mm dị gburugburu ma ọ bụ ntụtụ ụwa yiri ya, nke dị 3.2 mm ogologo karịa eriri abụọ dị larịị, yabụ gbanye ngwaọrụ tupu njikọta. Oghere dị n'etiti etiti dị n'etiti ntụtụ na etiti etiti ahịrị na-ejikọ eriri abụọ ahụ bụ 11.9 mm. E dere plọg a na amps 15.
N'akụkụ ụfọdụ nke Central na South America, ụdị B ebe a gbanyere mkpọrọgwụ ka bụ ihe a na-ahụkarị. Ya mere ndị mmadụ na-ebipụkarị ntụtụ ụwa ụdị plọg iji jikọtara ya na ntọala abụọ na-enweghị oghere.